တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ရာဇဓမ္မ သင်္ဂဟ
ပန်ဒိုရာ မေးမိလား သတိမရတော့ဘူး မမေရေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်သားစရာတွေပဲ။ အဲဒီလို မင်းကျင့်တရား ကင်းမဲ့သူများ ပြုမူတဲ့ အမူအကျင့်မျိုးကိုသာ "မင်းမဲ့စရိုက်" လို့ ခေါ်နိုင်မလား ဆိုတာ စဉ်းစားနေမိတယ်။
Thanks for the very knowledgable stuff.
လာဖတ်သွားတယ် မမေဓာဝီ။ ပို့စ်တွေအားလုံးက ပညာရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမဖတ်ပြီး မတတ်တတ် ကဗျာရေးထားပါတယ်
ညီမလေးရဲ့ စာတွေ ကိုးကားထားပါတယ် ခွင့်ပြုပါ.
မမ ကဗျာစပ်နည်းကို စံနစ်တကျ မသင်ဘူုးပါ.
ညီမလေး post တွေမှ မြင်ဆရာ.သင်ဆရာအမေဖြင့် ဖတ်ရှူဘူးပါတယ်. စိတ်ရင်းကတော့ စေတနာပါ. အိုကြီးအိုမ သေတော့မဲ့ ဘ၀ ငရဲပေါက်အ၀မှာ ချဉ်းကပ်နေတာတောင် အာဏာတွေမက် ခလေးတွေ သံဃာတွေ သတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုဖျက်။ သာသနာ ဖျက်သူတွေ အမြင်မှန် ရနိူးနိုး မျှော်ကိုး ရေးမ်ိပါတယ်. စိတိကူးယဉ် တယ် ဘဲဆိုလည်းဆိုစေပေါ့